iPhone 10 နှင့် 6s များတွင်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောပြproblemsနာ ၁၀ ခုနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Carmen rodriguez | | အိုင်ဖုန်းသတင်း, iOS 8, iPhone ကို 6, iPhone ကို6Plus အား
iOS 8 အသစ်ထုတ်ပေးနေသောပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိရှိပြီးမေမေကဲ့သို့ update ကိုစောင့်ဆိုင်းနေရသော်လည်းဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုရပါမည်။ update အားလုံးပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုတှေ့နိုငျသောအတူ။
စာရင်း iPhone6ပြproblemsနာ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သည် (iPhone 6s အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်) သို့သော်အသုံးအများဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမည့်အရာများဖြစ်သည်။ အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်၎င်းသို့မဟုတ်နောက်လာမည့်အရာတွင်၎င်းတို့ကိုပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ တိုက်ရိုက်ပုံသေ
သင်တစ်ဦးရှိပါက iPhone ကို 7, မလွတ်စေနဲ့ သင့်ရဲ့အသုံးအများဆုံးအမှားတွေဘာတွေလဲသူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲ
1 iPhone6ဘက်ထရီပြproblemsနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
2 WiFi ဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
3 iPhone6ပြproblemsနာတွေကို Bluetooth နဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
6 Landscape and Portrait View တွင် Jams ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနည်း
7 iMessage နှင့်အတူပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံ
8 ကျပန်း reboots ကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လို
11 အာကာသပြproblemsနာများ - မှတ်ဥာဏ်ကိုဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲ
iPhone6ဘက်ထရီပြproblemsနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
နောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံးသည် terminal ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပြီး iOS 8 က၎င်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဤပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘူယျအမြင်ထားရှိရန်လိုအပ်ပြီးဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကိုလည်းနားလည်ရမည် အသုံးပြုမှုပုံစံကဆုံးဖြတ် သူ့ကိုပေးလိုက်ရင် Apple ကအဲဒီလိုမထင်ဘူး တိုးတက်မှုမရှိပါဘူး အနာဂတ် system ကို updates များကို၌ဤကိစ်စတှငျ။
ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သောအရာများစွာရှိသော်လည်းအကောင်းဆုံးမှာ၎င်းဖြစ်သည် ကြည့်ပါ Las ကျနော်တို့ပြီးသားလုပ်အကြံပြုချက်များ ယခင်ပို့စ်၌တည်၏ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အသုံးပြုရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ.
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က Apple ၏ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့သည် WiFi နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ attenuated အချက်ပြမှုများကနေမတည်မငြိမ်ဆက်သွယ်မှုရန်။ ဤတိုင်ကြားချက်များသည် iOS 8 တွင်မရပ်တန့်သေးပါ။ အာမခံချက်မရှိသောဖြေရှင်းချက်မရှိသော်လည်းအကြီးအကျယ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီကြိုးစားရမည့်အရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
ပထမရွေးစရာမှာကွန်ယက်ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ setting များကို > ယေဘုယျ > ပြန်လည်စတင် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ Wi-Fi ကိုသုံးရန်စကားဝှက်ကိုပြန်ထည့်ရမည်။
ဒုတိယနည်းလမ်းမှာစနစ်၏ WiFi ကိုပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါအတွက် - setting များကို > သီးသန့်လုံခြုံရေး > တည်နေရာ > စနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ပိတ်ပါ WiFi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု y ပြန်လာ ဖုန်း။ ပြန်လည်ပြစ်မှုတစ်ခုပြီးတာနဲ့ WiFi ဟာပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိတယ်။
သင်၏ပြproblemsနာများက de iTunes နှင့်တိုက်ဆိုင်ညှိယူပါ, သွားရောက်ကြည့်ရှု လမ်းညွှန် ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့။
iPhone6ပြproblemsနာတွေကို Bluetooth နဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
ဒါပမေဲ့အံ့သွတာကဒီကိစ်စဟာမကျေနပ်မှုမြားစှာရှိတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ကားကို handsfree နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ function ကိုသုံးသူမြားမှဖွစျတယျ။ ဟုတ်ကဲ့ OK အဘယ်သူမျှမတ - အရွယ်အစား - ကိုက်ညီတဲ့ - အားလုံးဖြေရှင်းချက်လည်းမရှိ i-8 ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လျှင်လက်ကားယာဉ်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ။
လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်: setting များကို > ယေဘုယျ > ပြန်လည်စတင် ဒီမှာအတူဆက်လက်ဆောင်ရွက် ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ သိမ်းဆည်းထားသောချိန်ညှိချက်များအားလုံးပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်၊ သို့သော်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်ပြtheနာများကိုသူတို့ဖြေရှင်းသည်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက: iOS 8.0.2 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ကားနှင့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်နည်း
operating system သစ်ရှိ application များနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်းကြားရသည် အေးသို့မဟုတ်ရုံအနီးကပ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, စာပို့ရန်ငါကြိုးစားရန်အခါတိုင်းဇာတိမေးလ် app ကိုပိတ်။ တတိယပါတီအက်ပ်တွေလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်မအံ့သြပါဘူး။
မူလအက်ပလီကေးရှင်းများခံစားရလိမ့်မည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့် bug ကိုပြုပြင်မှုများဒါပေမယ့် Third-party developer တွေရဲ့မူကတော့ဖြစ်လိမ့်မယ် developer တစ်ယောက်ချင်းစီ၏တာ ၀ န်Apple သည် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီနှင့်သဘောတူသည်။
ထို့ကြောင့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာလုပ်ရန်ဖြစ်သည် အက်ပ်များကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထားပါ။ ပျင်းရိသူများအတွက်အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများကိုဖွင့်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိကြောင်းသတိရပါ၊ setting များကို > iTunes စတိုးနှင့် App Store နှင့်၏အပိုင်း၌တည်၏ အလိုအလျောက် downloadsဟုတ်ပါတယ်, သင် option ကိုသက်ဝင်သင့်သည် updates များကို.
iPhone 8 မှာ iOS6နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကကောင်းပြီးမြန်တယ် ကျပန်းနှေးကွေးခြင်းနှင့်အချို့နှေးကွေး အိုင်ဖုန်းအသစ်ပေါ်မှာ။ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်ပြanနာမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိနိုင်သည်။
iPhone နှေးနေလား။ ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲခြင်းကယင်းကို fix လိမ့်မည်
အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် iPhone6စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည် သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ iOS 8 မှအချို့၊
parallax အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလမ်းကြောင်း သုံး၍ ဖယ်ရှားပါ။ setting များကို > ယေဘုယျ > အသုံးပြုနိုင်စွမ်း > လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချပါ။ အဲဒါကိုထားကြောင်းကြည့်ပါ«Si»အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုပါကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချပါ အစိမ်းရောင်ပြောင်းရန်
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုဖယ်ရှားပါ၊ setting များကို > ယေဘုယျ > အသုံးပြုနိုင်စွမ်း > Contrast တိုးမြှင့် > Transparency ကိုလျှော့ချပါ နှင့်ဤ function ကိုသက်ဝင်။
Landscape and Portrait View တွင် Jams ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနည်း
iPhone6မှာကျန်နေသည် ရှုခင်းမြင်ကွင်းတွင်မှီဝဲ ဒေါင်လိုက်ပြောင်းပြီးနောက်။ အထူးသဖြင့်ကင်မရာအက်ပ်ကိုသုံးသောအခါ၎င်းသည်ကြီးမားသောပြisနာဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တီးဝိုင်း - အကူအညီရှိပါတယ်။
သငျသညျတူညီသောရူပါရုံကို mode ကိုသုံးစွဲဖို့သွားသည့်အခါ ဖုန်း၏တိမ်းညွတ်မှုကိုသော့ခတ်ပေးသည် ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ menu ကို၌တည်၏။
ပြproblemsနာအချို့မှာစာတိုအသစ်များမပို့နိုင်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းအသစ်များအားစာဖတ်ခြင်း (သို့) နာရီနောက်ကျသောမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်းမပြုနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်သောပြင်ဆင်မှုများရှိသည်။
ရပ်တန့်ပြီးသက်ဝင်စေပါ iMessage (ကုန်ကျစရိတ်ရှိတယ်ဆိုတာသတိရပါ)
Reboot လုပ်ပါ terminal ကို။
reset ကို configuration များ မိုဘိုင်းကွန်ယက်: setting များကို > ယေဘုယျ > ပြန်လည်စတင် > ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ ဖုန်းက reboot လုပ်ပြီးသိမ်းထားတဲ့ WiFi ကွန်ယက်တွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
ကျပန်း reboots ကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လို
အသုံးပြုသူများအတွက် ကျပန်း reboot iPhone6တွင် (မှတ်ဥာဏ်ယိုစိမ့်မှု) ဤအမှားသည်ယခင် iPhone 5, 5s နှင့် iPad Mini, Air နှင့် Retina တို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကကဲ့သို့မကြာခဏဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိသော်လည်းအချို့အသုံးပြုသူများအတွက်မူထိုသို့ဖြစ်ပျက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပြန်လည်စတင်ပါ iPhone 6
အထွေထွေပြန်လည်သတ်မှတ်သည် - setting များကို > ယေဘုယျ > ပြန်လည်စတင် > ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ.
စောင့်ပါ iOS ကို 8.1 ။
ရံဖန်ရံခါaအီးမေး (လ်) (သို့) မက်ဆေ့ခ်ျစာရိုက်သည့်အခါ iPhone6ကီးဘုတ်တွင်အနည်းငယ်နောက်ကျသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့ကုသမှုလည်းမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်ဆက်တင်အားလုံးကိုပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည် setting များကို > ယေဘုယျ > ပြန်လည်စတင် > ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ.
ဆက်သွယ်မှုနှေးခြင်း၊ လုံး ၀ ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းနှင့်အခြားအလားတူပြproblemsနာများနှင့်အော်ပရေတာနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများရှိသည်။ ဤပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားရန်;
Reboot လုပ်ပါ iPhone 6
မိုဘိုင်းဒေတာကိုဖြုတ်လိုက်ပါ setting များကို > ဒေတာ မိုဘိုင်းမိုဘိုင်းဒေတာနှင့် 4G option ကိုပိတ်ပါ။
ကိုသက်ဝင်စေ လေယာဉ်ပျံစနစ်, စက္ကန့် 30 စောင့်ဆိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းကွန်ယက်များအတွက်ရှာဖွေမှုကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါနောက်တဖန်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အာကာသပြproblemsနာများ - မှတ်ဥာဏ်ကိုဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲ
ကျွန်ုပ်၏ iPhone တွင်နေရာလွတ်မည်သို့ထားရမည်နည်း
သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းနေသေးတယ်ဆိုရင် မှတ်ဉာဏ်မရှိ အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်သင်လိုချင်သမျှကိုသိမ်းရန်၎င်းကိုမလွတ်ပါနှင့် သင့်ရဲ့ iPhone မှာနေရာလွတ်ရအောင်လုပ်နည်း.
အကယ်၍ သင်၏ iPhone သည်တိတ်ဆိတ်နေလျှင် (သို့) တိုက်ရိုက်မကြားရပါက၎င်းသည်၎င်း၏စပီကာနှင့်ဆက်စပ်သောပြaနာရှိနိုင်သည်။ ဒီကိစ္စမှာဒီအကြောင်းတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုဒီမှာပြပါမယ် iPhone အသံပြproblemsနာ.
iPhone ကို Restore လုပ်ပါ
ဒီအရာတွေအားလုံးကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ပြီးတော့သင်ဟာ Apple ဖိုရမ်တွေထဲကအဖြေတစ်ခုကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်၊ နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ပထမ ဦး စွာ iPhone ကိုကိုင်ပြီးaသို့ယူပါ Genius ဘား Apple Store မှဖြစ်သည်။ မသွားချင်သောသူများ (သို့) မသွားလိုသူများအတွက်၊ r ကိုကိုင်တွယ်ရန်စဉ်းစားရမည်စက်ရုံ setting ကို.
ဒီထဲကဘယ်ဟာလဲ iPhone6ပြproblemsနာ မင်းခံစားခဲ့ရလား စာရင်းထဲမှာမပါရှိပါသလား သင့် iPhone6သို့မဟုတ် 6s များတွင်ကြုံတွေ့ရသောချို့ယွင်းချက်များနှင့်သင်မည်သို့ဖြေရှင်းခဲ့သည်ကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 8 » iPhone 10 မှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ပြproblemsနာ ၁၀ ခုနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
ယေဘူယျအားဖြင့်ဖုန်းကိုအသုံးမပြုပါနှင့် ios7မှအသစ်အဆန်းအားလုံးကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်
တစ်ယောက်ယောက်မှာဖုန်း6Plus ကင်မရာနဲ့ပြaနာတစ်ခုရှိတယ်။ ငါ့မှာသူဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ ဒါဟာ 12mpx ရှေ့ကင်မရာနဲ့ငါ့မှာဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တယ်။ URUGUAY မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါ့ကိုဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုလို့ပြောခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှာနေရာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။
စာလုံးပေါင်းနှင့်စာလုံးနှင့်ယင်း၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုရေးသည့်အခါကာမဲန်။ ငါ "သတိ" မျက်စိနှင့်မြင်သောအမှားအယွင်းများသည်သတိရှိနေသည်ဟုကိုးကားသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမြင်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမြင်ရှိလိမ့်မည်။ "ဒါကြောင့် Apple ကဘာမှတိုးတက်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့မယုံဘူး" ဖြစ်လိမ့်မည်။ Apple ကမည်သည့်တိုးတက်မှုကိုမျှလုပ်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ၊ ဒါကြောင့်တစ် ဦး တိုးတက်မှုစေလိမ့်မယ်။ နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီ post ကိုထပ်ခါတလဲလဲ, တူညီတဲ့စာရေးသူအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသူတို့အရင်ကဆိုပါတယ်အဖြစ်ပြန်လည်ထက်ပြန်လည်မရှိလျှင်မရှိ, မရှိလျှင်ကြောင့်အချည်းနှီးလည်းထို့အပြင်အသုံးမကျဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားများ၊ အကယ်၍ သင်ကအယ်ဒီတာတွေကိုငှားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာရေးတယ်ဆိုတာသတိထားပါ။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာသိပြီးသိပါ။
Carmen rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ဤစာမူသည်ခေါင်းစဉ်နှင့် ဦး ဆောင်မှုကညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်းစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးအနှုန်းနှင့်သဒ္ဒါနှင့် ပါတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုရန်သာကျွန်ုပ်အားပြောပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စာလုံးပေါင်းအမှားအယွင်းများနှင့်အသံထွက်များမရှိခြင်းကိုအခြားသူများအားမဝေဖန်မီ။
မင်းမှာဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀ ါသနာပါ၊ ဒါပေမယ့်စကားမပြောတာကိုရပ်လိုက်ပါ။ စကားမစပ်၊ စပိန်ဟာကျွန်မရဲ့ဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော့်မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ဘူး၊
Carmen Rodriguez သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖတ်ရှုခဲ့ဖူးသည်။ ကာမဲန်အားအမြဲတမ်းဝေဖန်မှုများ၊ တစ်ခါတစ်ရံအကြောင်းပြချက်ပိုများပြီးအခြားသူများတွင်မူဒေးယန်ကိုပြောပြသည့်အတွက်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ သင်ဤအချိန်တွင်စကိတ်စီးခဲ့ပြီး“ စော်ကားခြင်းပုံစံ” ကိုလိုချင်ခြင်းအတွက်ဟန်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ဟန်ဆောင်ရန်မကြိုးစားပါ၊
Marcelo pepe ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသော Carmen! ဤရွေ့ကားသူတို့ဘာလုပ်ဖို့ရှိသည်နှင့်သူတို့ဝေဖန်ဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုမြင်ဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုအရာရာမဖတ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။ ဆက်လက်၍ သတင်းပေးပါ။ သို့မဟုတ်ပြုစုပါ။
Marcelo Pepe အားပြန်ကြားပါ
သင်၏နှုတ်သည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ပြည့်ဝသည်။ Damien, သင်အကြံပေးပါက၊
Damian စကားအားဖြင့်၎င်းသည်သတိမထားပါ။ ကာမဲန်ကောင်းစွာရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည် "သတိရှိခြင်း" ဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့အရာတွေအတွက်တော့ Carmen ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသလား။ သင်တစ် ဦး တည်း tilde သင်ထားကြပြီ (နှင့်ပျောက်ဆုံးနေအများအပြားရှိပါတယ်) ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာတောင်မသိဘူးဆိုရင်စာလုံးပေါင်းသင်ခန်းစာမပေးပါနဲ့။
Damien: လက်ျာသြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်သြတ္တပ္ပစိတ်သည်လက်တင် cum scio မှလာသည်။ Freídအချိန်တွင်သြတ္တပ္ပစိတ်ဟူသောစကားလုံးသည်လူကြိုက်များလာပြီး SC အုပ်စုတစ်ခုတည်းသာဆုံးရှုံးသည်။
Errata Freud ကမကြော်ဘူး
Damien, ဒီမှာသင်ဟာအိုင်ဖုန်းတွေနဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဝင်နေတယ်၊ ​​မှားနေတဲ့နေရာမှာမှားနေတဲ့ထိပ်တန်းလူတစ်ယောက်ရဲ့အတ္တကိုမဖော်ပြဖို့သင်ဝင်တယ်။
hahaha, ကြီးမားတဲ့ asshole ... သူတပါးအားမကောင်းသောအရာများပြောနေခြင်းနှင့်ယင်း၏ထိပ်ဆုံးမှ, သင်အပေါ် fouls ချပြီး hahaha ဘာလဲလူထုံ
အမှန်တရားကတော့ခင်ဗျားတို့မှန်ကန်တာကိုမြင်တွေ့ရတာပါ၊ ငါတို့ဟာအရာရာကိုပြုပြင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျက်စိကန်းသူယုံကြည်သူ masochists တွေပါဘဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီပြareနာတွေကအကောင်းဆုံးမိသားစုတွေတောင်မှဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအတိုင်းအတာ။
ကျွန်ုပ်သည် iPhone ကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောပြproblemsနာအချို့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်မပြောင်းပါ။
ios နှင့် osx ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ပထမဆုံးဗားရှင်းများသည်အမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုငါတို့အားလုံးသိသည်။
သူတို့ကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အကြောင်း၊ ios ကိစ္စမှာ osx ထွက်ခွာမှုအရနောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်တဲ့အထိအသစ်တည်ငြိမ်တဲ့အထိဆက်မွမ်းမံရန်လိုအပ်လျှင် iOSemite မှရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာမရှိဘူး၊ ဘယ်သူမှပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ကာမဲန်ကပြောတယ်။ သူတို့ဟာပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့ထင်ရင်နောက်ပလက်ဖောင်းကိုသွားဖို့ရွေးစရာရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်း ၆ အပေါင်းတွင်သင်နာမည်ပေးသမျှသည်ကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝမဆိုင်ပါက၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
The6plus သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အတော်လေးကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်အခြားရှုထောင့်တစ်ခုမှာအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ သင်ဖုန်းမှမဟုတ်သောအခြားအရာများနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အခါသင့်ကိုလွတ်မြောက်စေသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်။ အခြားသူများနှင့်သတင်းများ၊ ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်နောက်ခံနှစ်ခုစလုံးသည်မင်းကိုပို့စ်အသစ်တင်လျှင်ဟုတ်မဟုတ်သိရန်သင့်ကိုနေ့တိုင်းအကြိမ်ကြိမ်လည်ပတ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အက်ပဲလ်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူရှိနေခဲ့သော်လည်းသင်နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းစာမျက်နှာနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းသင်ကြားပေးသည်။ mac နှင့် ipad ။
မှန်ကန်သောအချက်မှာ“ iOS 10 တွင်ကြုံတွေ့ရသောပြ8နာ (၁၀) ခု” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဆဲလ်ဖုန်းများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ပါ။ iPhone6နှင့်6plus တို့တွင်ပြproblemsနာများစွာရှိတတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်မှာသူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းများစွာဖြင့်ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည် နှင့်အမှန်တရားကျနော်တို့က rebooting ဖြုန်းဖို့သွားကြသည်မဟုတ်
ငါ့မှာ ios6နဲ့ jailbreak ပါတဲ့ iphone 8.1 plus ရှိတယ်၊ ဒါကပုံတစ်ပုံနဲ့တူတယ်။ ငါ ၀ ယ်ရတာကိုအရမ်း ၀ မ်းသာမိတယ်။ ငါ့မှာ jail iPhone ပါ ၀ င်ပြီးဘက်ထရီကကြာရှည်မခံတဲ့အရောင်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမယ်။ ဝိုင်ဖိုင်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သွားပြီးဂိမ်းအကြောင်းတောင်မပြောတော့ဘူး။ တရုတ်မျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ မင်းကတင်းကျပ်တဲ့ဂျပိန်ဘောင်းဘီတွေမဝတ်ထားရင်ငါ့ရဲ့ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ငါ့ရဲ့စတိုင်မဟုတ်ဘဲငါကားထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာတစ်မီတာမီတာကွေးမသွားတာထက်တစ်ကြိမ်လောက်ထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အကယ်၍ ငါကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ringke fusion cover နဲ့ဖန်ခွက်တွေနဲ့ကောင်းကောင်းကာကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်။
ဒံယလေသ Moreno ဟုသူကပြောသည်
ငါ iphone6ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ အိမ်မှာ wifi နဲ့အကြိမ်များစွာ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ပြproblemနာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါအိမ်ကနေထွက်လာရင် ... 3g (သို့) 4g မိုဘိုင်းဒေတာကိုအလုပ်မလုပ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ဒါကငါ့ကိုဖြိုဖျက် .... အဖွဲ့၏တန်ဖိုးကိုပေးတော်မူ၏
Daniel Moreno အားပြန်ပြောပါ
Arturo Glezca ဟုသူကပြောသည်
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ iPhone6(ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်) ပြန်လည်ထားခြင်းတတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ငါပြောင်းလဲမှု (သို့) ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံရန်အခြား ၃ ခုကိုအာမခံရန်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုယူထားသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးပြီး၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုကြောင်းပြောကြသည်။ ငါအဲဒီမှာငါဘယ်လိုလုပ်တယ် ??? ကျွန်တော်တို့ 3Dlls terminal ကိုမသုံးတာကြောင့် Apple ကပိုပြီးဂရုစိုက်သင့်တယ်။ 200Dll ထက်ပိုတယ်။ ငါ Galaxy S900 ကိုပြန်သွားတယ်။
Arturo Glezca အားပြန်ပြောပါ
ငါ iPhone6Plus ကို reset ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရောင်းလိုက်တာနဲ့သူကပန်းသီးလိုဂိုနဲ့အိမ်မျက်နှာပြင်မှာပဲရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ restart မလုပ်၊ ? ပြန်လည်စတင်ရန်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းမြည်သံကို ၀ ယ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တွင်ပြhaveနာရှိနေသည်။ သူက၎င်းကိုသေတ္တာတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သည်။ ကြိုတင်အရာအားလုံးလည်းရှိသေးသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အသံသည်ဖယ်ရှားပြီး၊ သူငါ့ကိုခေါ်သည့်အခါပုံမှန်သေတ္တာထွက်လာသည်။ ဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်ရယူခြင်းအတွက်ငါမရကြဘူး,
ကျွန်ုပ်၏ပြသနာကအလုပ်မှာရုံးဝိုင်ဖိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်နေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်ချိန်များပြီးသည်နှင့် iphone အစီအစဉ်၏အင်တာနက်ကိုမချိတ်ဆက်သော်လည်း၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ဟယ်လိုတစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? တိုးချဲ့ထားသော screen ပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သနည်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို iPhone6အားသော့ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုသည့်အတွက်၎င်းသည်ကီးဘုတ်ကိုမမြင်ရပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းသောည စကားမစပ်ငါဘက်ထရီကိုညှစ်ပြီး ထပ်မံ၍ မျက်နှာပြင်ကိုပြန်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်။
ကာမင်ရိုဒရီဂွက်ဇ် (@carmenrferro) ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ as လိယ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်စတင်ရန် DFU တစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ၊ အဲဒါကမင်းကိုကူညီမယ်၊ ငါ့အတွက်ပြproblemsနာများစွာကိုဖြေရှင်းပေးတယ်။
Carmen Rodriguez (@carmenrferro) ကိုစာပို့ပါ။
အိန်ဂျယ်လိ guidobono ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ias လိယ၊ ပြtheနာကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလား။ iphone 6s အသစ်နဲ့လည်းအတူတူပါပဲ။ = /
Angeles Guidobono အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်း ၆ အပေါင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ mac နှင့် Bluetooth မှတဆင့်မချိတ်ဆက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကုဒ်ကြော်ငြာတစ်ခုသာရပြီး၎င်းတို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလင့်ခ်ပေးသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုဤပြproblemနာနှင့်ကူညီနိုင်သည် နှုတ်ဆက်ပါတယ်
အယ်လ်ဘမ် "All photos" ကိုဆွေးနွေးသည့်အခါဓာတ်ပုံ ၈၉၅ ရှိလျှင်ချိန်ညှိချက်များအချက်အလက်များရှိဓာတ်ပုံများနှင့်ဆွေးနွေးသောအခါကျွန်ုပ်သည် 895 ရရှိမည်နည်း။
မကြာသေးမီကငါ manzanita နှင့်အတူအများကြီးကံရှိသည်မဟုတ်။ iPad Air ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ ငါဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ STORE မှာအစားထိုးလိုက်တယ်။ နောက်တခါပြproblemsနာမရှိတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သုံးလအကြာမှာပဲငါပြောင်းခဲ့တဲ့ iPhone 5s ဟာအစားထိုးအာမခံချက်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ MacBook Pro ရုတ်တရက်ကျွန်တော့်ရဲ့ကဒ်ဖြစ်လာတယ်၊ အဲလေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပိုကောင်းလာတယ်။ ယခုတွင်မိသားစုတစ်ခုလုံးတွင် iPhone 6Plus ရှိပြီးနှစ်ရက်မကုန်တော့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်မလိုပါ။ ဒီဟာတွေဖြစ်လာဖို့သူတို့ဟာစျေးပေါတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါထွက်လာတော့မယ့် MacBook ကိုငါကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်စျေးကြီးတဲ့ဟာကခေတ်နောက်ကျသွားပြီ။ ဒါ့အပြင် tunderbolt2adapter (က 1 ဖြစ်စေ) တောင်မရှိဘူး။
ငါ့ကိုကူညီဘို့ငါသောစက်ရုံ applications များဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်
ဆဲလ်ဖုန်း iphone6 ​​ကကျွန်တော့်ကို update လုပ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒါကို axuliooooo ကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့သူကနာရီ ၁ မျက်နှာ app မှာထားခဲ့တာပဲ။ အရေးပေါ်အကူအညီ !!
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ မြေပုံများကိုလက်ကားကားမှတဆင့်ငါချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ဒီဗားရှင်းအသစ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ အဲဒါကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်၊ အဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်ဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိသွားပြီဆိုရင်၊
Lulu Perez ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုစိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ကြီးမားသောပြhaveနာရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းပြတ်တောက်သွားပြီး၊ မဖွင့်တော့ပါကတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်တာကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်ဖျက်ပါ။
lulu perez အားပြန်ကြားပါ
ကောင်းသောည, သင်ထိုပြsolveနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား ကျွန်တော့်မှာတူညီတဲ့တစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအိမ်ကိုဖိထားပြီးပါဝါနဲ့အိမ်ကိုဖွင့်ခဲ့ရတယ်
ငါ့မှာ iPhone 2015 ရှိတယ်။ ပနားမားရှိ Apple စတိုးဆိုင်မှာဝယ်လိုက်တယ်။ ယနေ့မေလ ၇ ရက်တွင်အားကုန်သွားသည်နှင့်ချက်ချင်းသေသွားပြီးမဖွင့်ဖြစ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
ငါ့မှာ iPhone6Plus ရှိတယ်။ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလကပနားမားရှိ Apple စတိုးမှာဝယ်ခဲ့တယ်။ ယနေ့မေလ ၇ ရက်တွင်အားကုန်သွားသည်နှင့်ချက်ချင်းသေသွားပြီးမဖွင့်ဖြစ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
Marcela chediack ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ!! နှစ်လမပြည့်ခင်သေသွားတဲ့တတိယမြောက် iPhone 3s !!!
ငါပြေးရန်ထွက်သွားသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်၏လက်မောင်းကြိုးဖြင့်ချိတ်ထားစဉ်၊ ဘလူးတုသ် - ... အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ရုတ်တရက်သူထွက်သွားပြီးတော့မဖွင့်တော့ဘူး။ ငါပထမသုံးလကိုသုံးလ၊ ဒုတိယကရက်သတ္တပတ်နဲ့ ၆ ရက် ၆ ရက်သုံးတယ်။ ဒါ့အပြင်၊ အာဂျင်တီးနားမှာတရားဝင် Apple စတိုးမရှိဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုသွားလာပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောင်းလဲချင်တာကိုစောင့်ရမယ်။ ငါအတွက် iphone မရှိတော့ဘူး။ 1rd ကျက်သရေဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲမှု။
Marcela Chediack အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာကျွန်ုပ်မှာ iPhone6ရှိပြီးမျက်နှာပြင်ကိုထိလိုက်တာကအရာရာတိုင်းဟာစူပါစူပါကြီးမားလာပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းလည်းမပြုနိုင်ဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ အဖြေတစ်ခုရနိုင်မလား။
ကောင်းပြီ၊ ငါ့မှာ iPhone6ရှိတယ်။ Battery အပြည့်ရှိသေးမှသာအဲဒါကိုဘာလို့သူ့ဟာသူပိတ်ထားတာလဲ၊ ဖွင့်ချင်တာမရှိတဲ့အချိန်တွေရှိရင်အဲဒါကိုပိတ်ထားတာတွေရှိတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သည်! သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလိုသည့်ဝေဖန်သူများ၏စကားကိုနားမထောင်ပါနှင့်။ Carmen ကျွန်ုပ်၏ iPhone6 ​​တွင်ပြသနာရှိသည့် I Message ပါ ၀ င်သောမျက်နှာပြင်မှာအလျားလိုက်တစ်ဝက်ရှိပြီးဒေါင်လိုက်ဝက်ဖြစ်နေပြီး၎င်းကိုမဖယ်နိုင်ပါ။ iPhone6အကြောင်းသိပြီးဒီမှာမှတ်ချက်ပေးသူ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Patty G. ကိုစာပို့ပါ။
မျက်နှာပြင်ချဲ့ထားပါက၎င်းသည် zoom ကိုသင် activate လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို iTunes ရှိကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါသို့မဟုတ် Zoon အားထိုနည်းဖြင့်ပိတ်ပါ
Javier DUQUE ဟုသူကပြောသည်
တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်း ၆ ချိန်ညှိခြင်းကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည် MAC ပုံရိပ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့် ၁၀% ပြန်လည်စတင်မှုတွင်၎င်းသည် ၂ ရက်ပါ ၀ င်သည်။ ဘက်ထရီလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီး၎င်းကိုပြန်လည်အားသွင်းပါကအိုင်တီသည်ထိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရပ်နေ၏ (MAC ပုံရိပ်နှင့် ၁၀% ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသည့်ဘားနှင့်အတူ)
JAVIER DUQUE သို့ပြန်ပြောပါ
JAIRO CASADIEGOS စာချုပ် ဟုသူကပြောသည်
Javier နေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်တော့် iPhone6နဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ သူတို့ဘာပြန်ဖြေခဲ့သလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
JAIRO CASADIEGOS LEAL သို့စာပြန်ပါ
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ငါမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး)) =
Manuel Miguel ဟုသူကပြောသည်
6 သေးငယ်တဲ့ tangada aifon
Manuel Miguel သို့ပြန်ပြောပါ
ငါမှာ aifon5ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကငါ့အတွက်အရမ်းကိုအဆင်ပြေတယ်။ ငါ aifon6ကိုဝယ်လိုက်တယ်။ ငါ garrefur ထဲကို ၀ င်တုန်းကတစ်လတောင်မပြည့်သေးခင်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ဖုန်းခေါ်ကြတာ။
ငါမှာယူရို ၇၀၀ ရှိတယ်၊ ငါဟာသစ်သီးဝလံခြံစည်းရိုးကိုမခေါ်နိုင်ဘူး၊ ငါတို့ဟာပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ gelipollas ကိုကြိုက်တယ်၊ မင်းကအက်ပယ်လို့ခေါ်တယ်၊ ဒါက fuck ဆိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင် fuck ဆိုတဲ့သင် garrefur ကိုမခေါ်နိုင်သေးဘူး၊ aifon
Constance Lillo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ! ။ myiphone သည် ၅ စက္ကန့်တိုင်းဖန်သားပြင်ကိုဖွင့်သည်။ ၎င်းသည်တစ်နေ့တာတွင်ဘက်ထရီလုံးဝနီးပါးမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အား charger ကိုနေရာတိုင်းသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါကအားမသွင်းဘဲနေရန်: (အကယ်၍ အဖြေတစ်ခုရှိမရှိမည်သူသိသနည်း။ ) ?
Constanza Lillo အားစာပြန်ပါ
ဟဲလို ... ငါပြန်လည်စတင်ပြီး iphone ကိုပိတ်လိုက်ပြီးပန်းသီးအိုင်ကွန်နှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည်
Mariana Demczuk ဟုသူကပြောသည်
Mariana demczuk သို့ပြန်သွားပါ
Pedro Pablo ဟုသူကပြောသည်
ချစ်ခင်ရပါသောကာမန်: iPhone6နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏မှတ်ချက်များနှင့်အကြံပေးချက်များကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားပါသည်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောရှုပ်ထွေးမှုများကိုတင်ပြခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။ ကျနော့်အမြင်အရ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရာများနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာ ၀ တ္ထုများထည့်သွင်းစဉ်းစားသောစက်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ကျွန်ုပ်ကျေနပ်သည်ထက်ပိုပါသည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောသုံးသပ်ချက်များရှိလင့်ကစား iPhone6သည် Apple တွင်စျေးကွက်၌စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်ပြီး Android နှင့်အတူထုတ်ကုန်များ၌လုံးဝအသုံးမဝင်တော့မည့် hardware တစ်ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင်ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားရှိသည်။ ဖိုရမ်၌သင်တို့၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်အလွန်အပြုသဘောမဆောင်သောသူများအတွက်ဥပမာအားဖြင့် Damien သူတို့ကပုံစံထက်စာသားရဲ့နောက်ခံကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်တယ်။ ကာမဲန်သည်စာရေးခြင်းတွင်အမှားအယွင်းများရှိသော်လည်းစကားစု၏အဓိပ္ပာယ်မှာဘယ်သောအခါမျှပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမရှိပါ ဒါမီယန်သည်ဤအချက်သည်သက်ဆိုင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်ဟုမယုံကြည်ပါ
Pedro Pablo အားပြန်ပြောပါ
ချစ်ခင်ရပါသောကာမန် (သို့) ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ငါ ၆ ပတ်တုန်းက iPhone6ကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်၊ ငါဒီပြproblemနာမရှိတဲ့တခြားဆဲလ်ဖုန်းတွေနဲ့အတူငါ့ကိုအရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုကိုသတိပြုမိတယ်။ ကျွန်ုပ် Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်သည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သောအခါ၎င်းသည်ကွန်ယက်မှအလိုအလျောက်ပြတ်တောက်သွားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏တယ်လီဖုန်းပံ့ပိုးသူကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်ခြင်းခံရခြင်းနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကွန်ယက်ချိန်ညှိမှုများသို့သွားပြီး ကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်းထားသည့်ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်၊ အမှန်တရားကတော့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့် application ကိုမဆိုငါအသုံးပြုသည့်အခါတိုင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်မှာစိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သည်။
ငါထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ပါလျှင်ကြည့်ရှုရန် WiFi ရွေးချယ်စရာများကိုငါကြည့်ရှုခဲ့ပေမယ့်ငါလုံးဝဘာမျှမတှေ့နိုငျပါသညျ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အတှေ့အကွုံမြားကိုပွုလုပျရနျအလှနျကြင်နာပါလိမ့်မည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပါပလော Aparicio ဟုသူကပြောသည်
Hello Damian WPA encryption ကိုသုံးပြီးကြိုးစားခဲ့ပါသလား။ ငါပြောမယ် - ငါတို့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့သည့်အမှုအရာများကိုငါသိသည်၊ Android ထုတ်ကုန်များပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သိခဲ့သည့်ကိစ္စများတွင် WPA encryption ဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ဆိုလျှင်ဤအမျိုးအစားတွင်ပြ,နာမရှိပါ။ မင်းရဲ့ iPhone6ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမသိလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါမင်းကိုပြောမယ်။ WPA မှာကျွန်တော်စပြီးစပြောကတည်းကငါမှာပြnotနာမရှိဘူး။
Pablo Aparicio ကိုပြန်ပို့ပါ
ဟဲလို၊ ကျွန်ုပ်၌ iphone63 days ago ပထမ ဦး ဆုံးညဥ့်ကိုငါအားသွင်းထားတာနောက်တစ်နေ့နိုးလာတယ်၊ ဖုန်းကသေပြီ။ ဖွင့်မထားဘူး ပြန်လည်သတ်မှတ်မရနိုင်ပါ ပြီးတော့ဘက်ထရီအားသွင်းစက်နဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ usb ကေဘယ်ကြိုးကငါ့ကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ဘူး။
ဘာပြproblemနာဖြစ်နိုင်လဲ။ အဆိုပါအားသွင်း pin ကို, ဘက်ထရီသို့မဟုတ်ဆဲလ်သေခဲ့တာလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ iPhone6ရှိတယ်၊ နောက်ဆုံးမွမ်းမံမှုပြီးကတည်းကပြsinceနာရှိခဲ့ပါတယ်။ လျှောက်လွှာအတွက်မိုဘိုင်းဒေတာကိုအသက်သွင်းသည် (ဤကိစ္စတွင်ယူကျု့တွင်) ကျွန်ုပ်သည်ချိန်ညှိချက်များမှထွက်ခွာ။ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးအပလီကေးရှင်းသည်မိုဘိုင်းကွန်ယက်နှင့်အသုံးပြုရန်မလှုပ်ရှားပါ။ wifi ဖြင့် youtube ကိုသာသုံးနိုင်သည်။
ငါ့မှာ iPhone 4s ရှိတယ်၊ Bluetooth ကားကိုငါ့ရဲ့ကား handsfree မှာပို့ပေးတဲ့ application ကိုငါတွေ့ပြီ၊ အဲဒါကကောင်းတယ်၊ အထူးသဖြင့် audiobooks အတွက်အရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ တခြားတစ်ခုရှိလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ဒီ application ကို Blue2car လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်အများကြီးရှာလို့မရဘူး။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
Jairo ivan ဟုသူကပြောသည်
ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးလုံခြုံမှုပုံစံသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းကိုမည်သို့ပြန်လည်စတင်မည်နည်း။ ။ ။ ။ ။ ။ ငါ့ကိုအကြံပေးချက်များ, ရွေးချယ်စရာများ .xfa ပေးပါ
jairo ivan အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Iphone6ရှိနေပြီး၎င်းမှာပိတ်နေပြီးကျွန်ုပ်ဘာမှမလုပ်နိူင်ပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကိုကားရပ်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဟယ်လို! ငါ့မှာ i phne6ရှိတယ်။ wifi network တွေရှာရတာအခက်တွေ့နေတယ်။ ငါကွန်ယက်ကိုရှာဖွေခဲငါရှာတွေ့သောသူတို့ကိုအလွန်အနည်းငယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဘာဖြစ်မလဲ အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ထပ်တူပြproblemနာတစ်ခုရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အာမခံချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်သလော။ ငါကအတွင်း၌ဖြစ်၏, သို့မဟုတ်ပါကဝယ်ဖို့
ဆဲလ်ဖုန်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်ဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ပါနှင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်သင်လိုအပ်သည်။ သူက reboot နည်းနည်းလေးပြန်လုပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ပြန်မတင်တော့ဘူး။ အိုင်တီဒီနည်းကိုပြောသည့်အတိုင်းဘယ်တော့မှပြန်မစပါနှင့်
ယူအက်စ်အေကကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ အခုဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြီးပြီဖြစ်သည်။ ပြArgentinaနာကကျွန်ုပ်သည်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ App Store မရှိ။ ဤနေရာတွင်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိသူတစ် ဦး ဦး အားနှစ်သက်ပါ။
olga cubillos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ iPhone6ရှိတယ်၊ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ရုတ်တရက်ရပ်သွားတယ်၊ ငါ့ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလျှောချ၊ ပိတ်လို့မရဘူး။ သော့ဖွင့်ဖို့ငါဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဒီဆဲလ်ဖုန်းတွေမှာပြနာရှိနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါအဖြေကိုမဖတ်ဘူး၊
olga cubillos သို့ပြန်သွားပါ
ဟယ်လို ! ငါ့မှာဖုန်း -6 ရှိတယ်။ ငါသေပြီ။ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကူညီနိုင်လျှင်, ငါကတန်ဖိုးထားတယ်။
ဒီနေ့မနက်မှာ Icloud မှာ ၅၀ မဂ္ဂါဘိုက်နေရာတွေ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကငါ့အကောင့်ကိုငွေသွင်းတယ် (စကားမစပ်၊ ထုတ်ဝေခဲ့သည့်နှစ်ဆ - သူတို့ ၁.၉၈ ယူရို ၁.၉၈) - ငါ ၅၀ capacityရာမစွမ်းအားရှိတယ်။ သူတို့အခမဲ့ပေးသော 50 ။ သင်ပေးအပ်သည့်အချိန်အထိသင့်ကိုပေးချေသည့်အချိန်အထိနောက်ကျသည့်အချိန်ရှိပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် iPhone6မှာပြaနာရှိနေတယ်၊ ​​ကျွန်ုပ်နှေးနေပြီးမှတ်ဉာဏ် vasia နီးပါးဖြစ်နေပြီ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်တယ်
အခါအားလျော်စွာအိုင်ဖုန်း ၆ ဆဲလ်ဖုန်းကင်မရာပျက်သွားသည်၊ မျက်နှာပြင်သည်အနက်ရောင်နှင့်ဘာမှမအလုပ်လုပ်ဘဲရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူ့ဟာသူပြန်ပြင်လိုက်သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတစ်ယောက်ယောက်ကသိရင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hector
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Iphone6Plus ရှိပြီးဒဏ္.ာရီတစ်ခုပေါ်လာသည်။ …။ ဒီကေဘယ်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုအသိအမှတ်ပြုမထားပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ချိတ်ဆက်ဘာမျှမရှိသည်ထွက်လှည့်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဂီတ၊ Wapps အသံစာများသို့မဟုတ်မည်သည့်အသံအမျိုးအစားကိုမျှမကြားနိုင်သည့်ပြhaveနာရှိသည်။ ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုတည်းသာစပီကာအလုပ်လုပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone တွင်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှနှိပ်ပြီးအသံလည်ပတ်မှုကိုသက်ဝင်စေသောကြောင့်ဖုန်းကိုမဟုတ်ဘဲဖုန်းကိုမဟုတ်ဘဲမိနစ်ပိုင်းအတွင်းဖုန်းပိတ်ထားပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြီးနောက်၊
ငါ့မှာ iPhone 6s ရှိတယ်၊ အီးမေးလ်ပို့ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်။ ငါ့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါလက်ခံရရှိမယ်၊ မပို့တော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် (သို့) လျှို့ဝှက်နံပါတ်သည်မှားသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မမှန်ပါ။ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ငါအီးမေးလ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးပြန်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဖြေရှင်းချက်မရှိဘူး
Carmen: မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါဒီ iPhone နဲ့အတူအသစ်ပါ။ ငါ့မှာ6Plus ရှိပေမယ့် 3D application မရှိသလိုကင်မရာမှာတိုက်ရိုက်ဓာတ်ပုံ (သို့) ရှေ့မီးမပါရှိပါဘူး။ ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲ
Rossy Romero အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone6s ကို back up လုပ်လိုက်သောအခါ screen သည်ပိတ်သွားပါသည်၊ သို့သော်ဖုန်းမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ဖြေကြားခြင်းခံရနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် pc သို့ဆက်သွယ်သောအခါနံပါတ်ကုတ်နံပါတ်များကိုတောင်း။ ဖြစ်စေ၊ နံပါတ်များရှိသော်လည်းသော့ဖွင့်ခြင်းမရှိသောမျက်နှာပြင်ကိုထိပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone6မှာပုံမရှိသည့်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရောက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်မဖြေနိုင်ပါကဖန်သားပြင်မဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကူညီနိုင်လျှင်ငါကအရမ်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာ iPhone6Plus ရှိပါပြီ။ အဲဒါကိုမွမ်းမံပြီးကတည်းက၎င်းသည် aprtuna ဖန်သားပြင်တွင်ကပ်နေပြီး၎င်းကို boot တက်ဖို့စောင့်ရပါမယ်၊ ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
Marcelo, ငါနဲ့အတူတူပါပဲ 4G ကအရမ်းနှေးတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှု ၂ ခုနောက်ပြန်သွားသောအခါ iOS နှင့်နှစ်များတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အခက်အခဲရှိခြင်း။ သူကထတော့မယ်၊ ဂျော့ဘ်၊ ဒီတစ်ရက်၊ သူကအရမ်းလန်းလွန်းလို့လောင်နေတာပဲ !!!
ကျွန်ုပ်ဖုန်းသို့ Bluetooth နားကြပ်ဖြင့်ပြောသောအခါကျွန်ုပ်ကြားသော်လည်းသူတို့မကြားပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်မှာ iphone5မှာပြသနာရှိနေတယ်၊ ​​youte music နဲ့အရမ်းနားထောင်တယ်။ ဒါပေမယ့်နားကြပ်ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဂီတကထွက်လာမယ်၊ အသံကဆူညံသံပဲထွက်လာတယ်၊ နားကြပ်မှတဆင့်မကြားဘူး .... ။ ငါကြားနာကိရိယာကိုသုံးမှသာလျှင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ??? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Manuel Alejandro Chacin Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
Manuel Alejandro Chacin Rodirguez ကိုပြန်ပြောပါ
Roberto Becerril ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင်၎င်းမှောင်မိုက်နေသည့်တောက်ပမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများရှိနေပြီး၎င်းသည် iPhone 6s ကိုပြန်လည်ရရှိရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရသည်
Roberto Becerril အားပြန်ကြားပါ
ယေရှု Diary ဟုသူကပြောသည်
နောက်ဆုံးညမွမ်းမံပြီးနောက် iPhone6မှာဝိုင်ဖိုင်ပြproblemနာရှိနေတယ်။ ငါ router ကနေနည်းနည်းဝေးသွားပြီး wifi ပြင်းထန်မှုဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ငါ router ကနေ ၁ မီတာရောက်တဲ့အခါမှာအတန်အသင့်တည်ငြိမ်နေတယ်။ ငါစုံစမ်းစစ်ဆေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဘာမျှမ။ အသစ်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်နှင့်အချို့သောအတွေးအခေါ်များကိုမျှဝေလျှင်ပင်ရှင်းလင်းသောဖြေရှင်းချက်တော့မရှိသေးပါ။ ငါ့မှာ iOS 1 (နောက်ဆုံးပေါ်) နဲ့ iPhone6ရှိတယ်။
setting များ၊ itunes မှတဆင့်၊ icloud နှင့်ဘာမျှမမှတဆင့်အခြေခံများအားလုံး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်။ …။
အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား ???????? '
ပထမ ဦး ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
JESUS ​​DIARTE မှပြန်ပြောပါ
ဂျူလီယာနာ Garmendia ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ငါ့မှာ iPhone6ရှိတယ်။ အဓိကမျက်နှာပြင်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဆိုလိုတာကငါစာတွေ၊ အသိပေးချက်တွေ၊ ခေါ်ဆိုမှုတွေရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမဖြေနိုင်ဘူး။ ဘာမှမပေါ်လာဘူး။ သူကဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့ပို့လိုက်တာတစ်ခုရွေးလိုက်တဲ့အခါလက်ဗွေနဲ့သော့ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး (သို့) ကီးဘုတ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူဖြစ်သွားပြီဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှမသိဘူးလား။ အဘယ်သို့ငါပြုရမည်နည်း။ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါဖြစ်စေပိတ်ထားလို့မရပါဘူး! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
Juliana Garmendia ကိုပြန်ပြောပါ
ဟိုင်းမားကို့စ, ငါနင့်ထင်မြင်ချက်နဲ့တူတယ်။ ငါပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနံနက်ခင်းမှာ၊ iPhone6Plus သည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ် application ကိုမျက်နှာပြင်မည်မျှထိတွေ့စေကာမူ၎င်းကိုပိတ်ထားရန်နှင့် ထပ်မံ၍ ထိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုထပ်မံထိတွေ့ရန်ခွင့်မပြုပါက iPhone XNUMX Plus သည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ application များအားခွင့်မပြုပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုစွန့်ခွာရန်ဖန်သားပြင်ကိုထိသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ခြေရာနှင့်ပြုလုပ်ရမည်ဆိုပါကတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဟယ်လို။ ငါဒီဖိုရမ်အတွက်အသစ်ဖြစ်၏ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အ ၀ င် Caller ID ကိုပိတ်ထားသည်။ အားလုံးခေါ်ဆိုမှုအမည်မသိအဖြစ်လာကြ၏။ သင် configuration / ဝင်လာသောခေါ်ဆိုသူ၏ ID ကိုထည့်သည့်အခါခလုတ်သည် "shaded" ဖြစ်ပြီးငါ့ကို၎င်းကိုသက် ၀ င်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ ငါအကူအညီနဲ့တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ Alicia
ငါ့မှာ ipone6ပေါင်း 126 gb ရှိတယ်
luisao acosta ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဖန်သားပြင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ၎င်းသည်ပန်းသီးထက်မကျော်လွန်ပါ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအောက်တွင်အမှားလုပ်မိသောအခါဘာလုပ်ရမည်နည်း။
luisao acosta အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်၏ iPhone6Plus သည်သူ့ဟာသူထိန်းချုပ်မရနိုင်ပါ
ငါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အခိုက်အတန့်ပိတ်ထားရန်ရှိသည်, အမှန်တရားငါ့ကို hee ပင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့်ငါကဒီပြproblemနာကိုငါ့ဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှာသယ်ဆောင်မှသာငါကငါ့ဂျာကင်အင်္ကျီထဲမှာဝတ်ဆင်ပေမယ့်အသင်းကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအခါထိုကဲ့သို့သောမဟုတ်, ငါ့ကိုသာဒီပြcausesနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါအဲဒါကိုလီမာမြို့က storeapple ဆီပြန်ပို့ပေးဖို့ Apple ကပြောခဲ့တယ်
ချစ်ခင်ရပါသော၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone6နှင့်မည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း modem နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုသည်၊ Wi-Fi အချက်ပြရန်လိုသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် modem မှထွက်သွားလျှင်အချက်ပြမှုပျောက်ဆုံးသွားလျှင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားပြီးဖတ်ပါ။ ဒီမော်ဒယ်ကအင်တင်နာပြproblemsနာတွေနဲ့လာတယ်၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone6+ wifi နှင့် bluetooth update မလုပ်ခြင်းသည်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးပါ
အမှန်တရားကတော့နောက်ဆုံးပေါ် IOS updates များသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Android သို့ကူးပြောင်းရန်အလေးအနက်စဉ်းစားနေသည်။
ကျွန်ုပ်၌စာရေးခြင်းနှောင့်နှေးနေပြီးဘက်ထရီရုတ်တရက်နိမ့်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်ကင်မရာကိုအသုံးပြုပါကမှော်ဆန်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ပလပ်အင်ချိတ် ထား၍ ၎င်းတွင်ဘက်ထရီရှိနေသေးသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိပါကပြန်သွားခြင်းမရှိပါ။
IOS 11 မှာကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ IOS update ကကျွန်တော့်ကိုတကယ်ဒေါသထွက်စေတယ်၊ ​​iPhone မှာရှိတဲ့လှပတဲ့အရာကဒီ update နဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပျောက်သွားတယ်။
Karla က de Garcia က ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ iPhone6Plus ရှိကင်မရာသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရပါဘူး
Karla de Garcia သို့စာပြန်ပါ
felipe Hassan ဟုသူကပြောသည်
အပြစ်၏ကြီးမားသောပန်းသီး၏ပရိသတ်များအတွက်အမှန်ပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်အားသင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်သည်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone6သည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုတွင်မတည်ငြိမ်မှုကိုတွေ့မြင်နေရသည်……ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
felipe hassan အားပြန်ကြားပါ
iOS 100 ၏ beta2နှင့် beta3အကြားပြောင်းလဲမှု ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်